WeHooded ahluphekayo, Baby iitawuli, Royal Velvet iitawuli, ingubo nomakhi - Bailixin
Zifake kwihlabathi kuphela kunye efikelelekayo textile ekhaya inkampani yethu! Sinikezela iitawuli nezinto zokulala usapho nganye ngamaxabiso elifanelekileyo.
Nqakraza kwaye bafunde ngathi
iingqokelela zethu efakiwe ngeeseti ezithambileyo bath itawuli, microfiber opholileyo iiseti zemidlalo itawuli kunye iitawuli bamalwandle, iiseti itawuli fashion ikhitshi kunye ebhedini ingubo nokhathalelo set.Comprehensive impilo yakho.
Ngaba wakha weva ingubo loqalo? Kuyinto yimveliso elihle elibonelela amaqashiso wentuthuzelo. Ezi iingubo zenziwa ifayibha Ultra soft bamboo eyenza kube mnandi kakhulu ukuba snuggle in.Bamboo ingubo ikhethwa ngabaninzi ngenxa ukuthamba yayo esinika intuthuzelo oluphuculweyo. Uqalo yaziwa kwiipropati yayo antibacterial. Iqulethe bamboo Kun, nto leyo arhente yendalo antibacterial. Kuye ubuchule ukubulala iintsholongwane kunye izinambuzane eziyingozi izoyikiso kakhulu kwimpilo.